E-Journal: November 2007
အဲဒီနေ့ကပေါ့ အလုပ်ကအပြန် တစ်ခွက်တစ်ဖလား ၀င်ဆွဲတာ။
အပြန်လမ်းမှာ ဆိုးလွန်းဝါးလွန်း လူမြင်မကောင်း၊သူမြင်မကောင်းယိုင်ထိုးနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပါးစပ်ကလည်း တတွတ်တွတ်နဲ့ အသံတွေထွက်နေပေမယ့် ဟိုလိုညစ်ညစ်ညမ်းညမ်းတွေကလည်း မပြောတတ်ပါဘူး။ ကျုပ်အော်တာကလည်း "ဘယ်ခွေးမှ လူမထင်ဘူးကွ" လို့ပါ။ ဘာမှားလို့လဲဗျာ။ ဘယ်လိုကဘယ်လို အမြင်ကတ်ခံနေရမှန်းကို မသိပါဘူး။ တစ်ခုခုနဲ့တော့ အထုခံလိုက်ရပုံတူပါရဲ့။
ကောင်လေးတစ်ယောက်က သူ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လို့ အခန်းတစ်ခန်းထဲကို ၀င်ရတယ်ဗျ။ စပေ့မြန်မာတွေက အင်တာဗျူးချင်ကြလို့တဲ့။ လူ့ပြည်က မြန်မာတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ချင်နေတာကြာပြီတဲ့။ မင်းတို့လည်း မြန်မာလူမျိုးတွေပဲဟာကို ဘာထူးဆန်းလို့လဲ ပြန်ပြောတော့ ကောင်လေးက ကျွန်တော်တို့က မြန်မာပါပဲတဲ့၊ ဒါပေမယ့် လူပြည်ကတော့ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ အော် ဒါ့ကြောင့်စပေ့မြန်မာတွေလို့ ပြောခဲ့တာကိုး။
အခန်းထဲကို ၀င်လိုက်တော့ လန့်သွားတာပဲဗျာ။ "အူ..အူ.." ဆိုပြီးထအော်ပါရောလား။ ဘေးက ကောင်လေးကို ဘာကြောင့် ခွေးလိုအော်နေရတာလဲမေးတော့ ခွေးလိုအော်နေတာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပါပဲတဲ့။ တကယ်တမ်းကျတော့ ဘေးကကောင်လေးက စကားပြန်ကိုဗျ။ မြန်မာလူမျိုးခြင်းအတူတူ စကားပြန်ထားရသတဲ့။ ဟီးဟီး ကြားဘူးပေါင်ဗျာ။ ကျန်တဲ့လူတွေက ကျုပ်ပြောတတ်တဲ့ လူစကားကို မပြောတတ်တာဗျ။ ဟိုကောင်လေးက ရှေးဟောင်းမြန်မာစကားကိုလေ့လာတာတဲ့။ ဘယ်လိုပါလိမ့်။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရှေးဟောင်းတာလဲဆိုတော့၊ ဦးလေးတို့ ကမ္ဘာမှာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ပဲရှိသေးတာမဟုတ်လားတဲ့။ ဒီမှာက ၃၀၀၇ ခုနှစ်ရောက်နေပါပြီတဲ့။
မေးကြပါလေရော။ ဦးလေးက ဒီကို ဘယ်လိုရောက်လာတာလဲတဲ့။ ကျုပ်လည်း မှတ်မိသလောက်ပဲ ရှက်ကလေးပင့်ချင်လို့ ၀င်ဆွဲလိုက်တာ၊ ဘယ်သောက်ကမြင်းကောင်တွေ ဆော်လိုက်တယ်မသိဘူးလို့။ သတိရတော့ ဒီသူငယ်လေးက အင်တာဗျူးချင်လို့ဆိုပြီး ခေါ်လာလို့ ဒီရောက်လာတာလို့။ ပြောကာမှဆိုးရော ရှက်ဆိုတာလဲ၊ ရှက်ပင့်တယ်ဆိုတာကရော ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်လဲတဲ့။ ပြောရတော့တာပေါ့ ရှက်ပင့်တယ်ဆိုတာက အရက်သောက်တာကို ပြောတာပါပေါ့။ လုပ်ပြန်ရော အရက်ဆိုတာ ဘာပါလဲတဲ့။ အရက်ဆိုတာ အရည်တွေလို့။ အဲဒါတွေသောက်လိုက်ရင် ခေါင်းကို ချာချာလည်နေအောင် မူးတာပေါ့။ မူးလာရင် ပြောချင်ရာတွေ ပြော၊ လုပ်ချင်ရာတွေလုပ်တာပေါ့။ ရှေ့နောက် မဆင်ခြင်တော့ဘူး။ အရှက်ဆိုတာလည်း မရှိသလောက် နည်းသွားတယ်ပေါ့။ လူစိတ်ပျောက်ပြီး လူလူချင်းတောင် လူမထင်တော့တာပေါ့။ စိတ်ထဲ အရက်သမားတွေ ဖြစ်တတ်တယ်ထင်တာတွေ အကုန်ပြောပြလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ရှေးဟောင်းမြန်မာ့ရာဇ၀င်ကိုလေ့လာနေတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်က ထပြောတာပေါ့။ ဒါဆို အရက်ဆိုတာ အာဏာလိုဖြစ်ရမယ်တဲ့။ ခက်ပါလေရော။ ဘယ်လိုဘယ်လိုကွ ဆိုတော့ သူလေ့လာတဲ့ ရာဇ၀င်ထဲက စစ်ဘုရင်တစ်ပါးက အရက်သောက်မသောက်တော့မသိဘူးတဲ့၊ ရှေးဟောင်းသမိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာ ဖတ်ရတာတော့ အာဏာယစ်မူးပြီး၊ တိုင်းသူပြည်သားလူအများကိုတောင် လူလို့ မမြင်တော့တာဖတ်ဖူး၊လေ့လာဖူးသတဲ့။ ကျုပ်လည်း သက်ပြင်းချ၊ ခေါင့်တစ်ငြိမ့်ငြိမ့်လုပ်ရတော့တာပေါ့။
စပေ့မြန်မာဆိုပေမယ့် မြန်မာချင်းတော့ သံယောဇဉ်ရှိပုံရပါတယ်။ ဘယ်လိုတွေနေ၊ ဘာတွေစားကြသလဲဆိုပြီး မေးတော့ကာ၊ ကျုပ်လည်း ထမင်းတောင် နပ်မှန်အောင် မစားရတဲ့သူတွေကများသဗျာဆိုတော့လည်း နားမလည်ကြဘူး၊ ထမင်းဆိုတာ ဆန်ကနေချက်ယူရတဲ့အကြောင်း၊ ဆန်ဆိုတာက စပါးပင်ကနေရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရှင်းပြရတာပေါ့။ စပါးပင်ဆိုတာက လယ်ကွင်းထဲမှာစိုက်ယူရတယ်။ ထမင်းနပ်မမှန်တာဆိုကလည်း မစားရတဲ့နေ့တွေကများနေတာကို ဆိုလိုကြောင်း အကျယ်တ၀င့်ရှင်းလင်းတင်ပြရတော့တာပေါ့။ ဒါတောင် နားလည်ပုံမပေါက်ကြပါဘူး။ ပေါင်မုန့်မရှိရင် ကိတ်မုန့်စားကြပေါ့ဆိုတဲ့ အမျိုးတွေကြနေတာပဲ။
အလုပ်ကို မြန်မာတွေဘယ်လိုလုပ်သလဲတဲ့။ ကြိုးစားကြသလားတဲ့။ အင်း ပြောရတယ်။ အများကတော့ မလုပ်၊မရှုပ်၊မပြုတ်လုပ်နေကြတယ်ပေါ့။ တိုးတက်သလားဆိုတော့ နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ တစ်စုကတော့ တိုးတက်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ တစ်ခြမ်းကတော့ ဆုတ်ယုတ်တယ်လို့ ပြောကြတယ်။ ဘာလို့ နှစ်ခုကြီးဖြစ်နေတာလဲတဲ့။ တစ်ဖက်က ညာနေလို့ပေါ့လို့။ ညာတယ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့။ ညာတယ်ဆိုတာ မဟုတ်တာတွေ၊မမှန်တာတွေကို ပြောဆိုတာကိုပြောတာလို့။ မမှန်တာတွေ၊ မဟုတ်တာတွေကို ပြောတာ ဘုရားမကြိုက်ဖူးလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်တဲ့။ အင်း ခက်လှပါလားကွယ်။ သူတို့တွေ ဘုရားမကြိုက်တာ အကုန်လုပ်တယ်ဆိုတာ သူတို့ နားမလည်ကြဘူး။
သူတို့လည်း စားသောက်နေထိုင်ရေးတွေ မေးရတာ စိတ်ချမ်းသာစရာ မကောင်းဘူးလို့ သဘောပေါက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ လူတွေ အချင်းချင်း မေတ္တာတရားရှိကြ၊ထားကြသလားတဲ့။ လူပါဆို၊ အမျိုးမျိုးပေါ့။ မေတ္တာတရား ပေါများတဲ့သူရှိသလို၊ ခေါင်းပါးတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့လို့။ ဘယ်သူတွေ ကြီးစိုးသလဲတဲ့။ ခက်ပါ့ကွယ်။ မမေးကြပါနဲ့။ အလည်သာလိုက်ခဲ့ကြပါ။ အော့နှလုံးနာပြီး ပြန်သွားကြမယ်။ ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ချင်လှပါပြီ။ ကိုယ့်ခေါင်းကို ကိုယ်ပြန်ရိုက် သတိမေ့လိုက်ရကောင်မလား။ ကိုယ့်အရပ်မှာတော့ မေ့ချင်ရင်လည်း ရှက်ကီလေးနဲ့ပေါ့။ ဒီမှာကလည်း ဒါတွေကမရှိတော့ အခက်သား။
အဲဒီမှာ "၀ုန်း"ဆိုတဲ့ အသံကြီးနဲ့ ရေတွေ ကျုပ်အပေါ်ပြုတ်ကျ။မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တော့ စပေ့ကမိုးပြိုတာမဟုတ်ဘဲ အိမ်ကညီလေးက အကိုကြီးအမူးပြေအောင် ရေပုံးနဲ့ရေလောင်းချလိုက်တာတဲ့။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 7:38 AM0comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 7:49 AM0comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် ဝေမျှခြင်း သီချင်းများ, ကေဇက်
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 8:51 PM0comments
စာမေးပွဲတစ်ခုတွင် မှား၊မှန် မေးခွန်းအမျိုးအစားများကိုသာမေးလေသည်။
ကျောင်းသားတစ်ယောက်သည် ပိုက်ဆံအကြွေစေ့တစ်စေ့အားမြောက်ကာ အဖြေများအားချရေးလေသည်။
- သူကတော့ အရင်ဆုံးပြီးတော့မှာပဲ။
ကျန်ကျောင်းသားများသည် အဖြေများရေးပြီး၊ အဖြေစာရွက် အပ်ကာထွက်သွားသော်လည်း ယင်းကျောင်းသားမှာ အကြွေစေ့အားဆက်၍မြောက်နေဆဲပင်ဖြစ်လေသည်။
ပရော်ဖက်ဆာသည် စိတ်တွင် မရိုးမရွှဖြစ်လာကာ၊ ကျောင်းသားအားမေးလေသည်။
- မင်း မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေပြီးပြီမဟုတ်လား။
- အေး ဒါဆို ဘာဆက်လုပ်နေတာလဲကွ။
အမျိုးသမီးမှ သူမ၏ အမျိုးသားကိုပြောသည်။
- တို့လည်းနော် ဘယ်မှလည်း မထွက်ဖြစ်၊ မသွားဖြစ်ဘူးနော်။
- အေး၊ မနက်ဖြန်ခါ အမှိုက်ပစ်သွားမယ်၊ မင်းကိုငါနဲ့အတူခေါ်မယ်နော်။
- မိန်းမရေ၊ တို့ကလေးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတာလဲကွ။
- အခန်းထဲမှာ ခြောက်ယောက်ဖြစ်နေပါ့လား။
- အော် သူတို့ သူငယ်ချင်းလေးတွေ ရောက်နေတာ။
- ဘယ်လိုလုပ်ပြီး တို့ကလေးနဲ့ တစ်ခြားကလေးကို ခွဲရမှာလဲကွ။
- အော် ကျမ အမှတ်အသားလုပ်ထားတယ်။ ထိပ်ကွက်ပြီး အနီရောင်ဆေးဆိုးထားတာက တို့ကလေးတွေ မဟုတ်ဘူး။
- အမျိုးသမီး အပေါင်းအသင်းများ
မိန်းမတစ်ယောက်သည် ညအိမ်ပြန်မအိပ်ဘဲ၊ မနက်လင်းခါမှ အိမ်ပြန်ရောက်လာကာ ညက သူငယ်ချင်းမ တစ်ယောက်ထံတွင်အိပ်ခဲ့သည်ဟု ပြောလေသည်။
ယောက်ျားမှ မိန်းမနှင့် အခင်မင်ဆုံး သူငယ်ချင်းမ ၁၀ ယောက်ထံသို့ ဖုန်းဆက်ကာ မေးမြန်းသောအခါ - ၁၀ ယောက်လုံးသည် ညတုန်းက သူမတို့ဆီတွင် အိပ်မသွားပါဟု ဖြေကြလေသည်။
- အမျိုးသား အပေါင်းအသင်းများ
ယောက်က်ျားတစ်ယောက်သည် ညအိမ်ပြန်မအိပ်ဘဲ၊ မနက်လင်းခါမှ အိမ်ပြန်ရောက်လာကာ ညက သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ထံတွင်အိပ်ခဲ့သည်ဟု ပြောလေသည်။
မိန်းမမှ ယောက်ျားနှင့် အခင်မင်ဆုံး သူငယ်ချင်း ၁၀ ယောက်ထံသို့ ဖုန်းဆက်ကာ မေးမြန်းသောအခါ - ၅ ယောက်မှ သူတို့ထံတွင်အိပ်၍ ပြန်သွားပြီးဟုဖြေပြီး၊ ကျန် ၅ ယောက်က ယခုဖုန်းဆက်သည် အချိန်ထိ သူ့တို့ဆီတွင်ရှိသည်ဟု ဖြေကြလေသည်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 5:54 PM0comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် ကေဇက်, ပျော်စရာလေးတွေ
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 3:05 PM 1 comments
မြေးလေး ဖွား အမွေပေးချင်ပြီပြောတော့
ဖွား အသက်ရှည်စေချင်လို့ပါ အကြောင်းပြ . . . . .
လူလေး အမေ စိတ်အေးချင်ပြီ ဆိုလာတော့
အမေက ကြည်နူးဖွယ်ရာ အပြုံးနဲ့
ငါ့သားက အ သုံးလုံးမှ မကျေပဲတဲ့ . . . . .
ကိုကို လူပျိုကြီးလုပ်မှာလားတဲ့ . . . . .
ဟား . . . . လောကကြီးကိုက မတရားတာပါကွယ်
ငါချစ် သူချစ် အတူချစ်ကြသူတွေကြားမှာ
အတူရှိလည်း လွမ်း . . . အတူမရှိလည်း လွမ်း
တမ်းတနေရချိန် ချည်း . . . . .
သြော် . . . . .
ငါက ပန်းဝင်ခွင့်မရတဲ့ ပြေးသူ ။ ။ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 8:44 PM2comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 9:45 PM 1 comments
မသွားခင်မှာ သူမရဲ့ နှလုံးသားကို အရင်ပစ်ချခဲ့တယ် . . .
မြူခိုးတွေဝေ့နေတဲ့ ကုန်းမြေတစ်ခုမှာ သူ့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်
သူဟာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ အေးချမ်းမှုကို ယူဆောင်လာခဲ့တယ် . . .
သတ္တ၀ါဆန်းတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေလိုက်နဲ့ . . .
ဘာကိုခံစားရမှန်းမသိအောင် ခံစားမှုတွေများတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုး . . .
လက်ရှိကမ္ဘာက ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ မခံစားနိုင်ကြဘူး
ကမ္ဘာကြီးရှေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပဲ တစ်ချိန်လုံးတွေးနေတယ် . . .
ကဲ! ဘယ်လိုလဲ ?
ကမ္ဘာကြီးက ပူနွေးလာပြီတဲ့ !!!
ဖြေတော့ဗျာ . . . . . ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 8:52 PM0comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် ကဗျာ့ ပန်းခင်း
စားသောက်ဆိုင်တွင် စားပွဲထိုးမှ မိန်းမလှလေးတစ်ယောက်ရှေ့တွင် စာရွက်တစ်ရွက်ချပေးလိုက်သည်။
"မင်းကိုမြင်မြင်ခြင်းကိုချစ်မိသွားတယ်၊မင်းမရှိဘဲနဲ့ ဘ၀မှာတစ်ယောက်တည်းမနေပါရစေနဲ့။ မနက်ဖြန် ညနေစာ အတူစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ အကယ်၍ မနက်ဖြန်ခါမှာ မင်းမအားဘူးဆိုရင် မင်းရဲ့ညာဖက်မှာထိုင်နေတဲ့ ကောင်မလေးလှလှဆီကို ဒီစာရွက်လေးကမ်းပေးပါ။"
အမျိုးသမီးတွေ ဘောလုံးကန်တာတော့ မယုံချင်ဘူးကွာ။ စဉ်းစားကြည့် ၀တ်စုံဆင်တူဝတ်နိုင်တဲ့ အမျိုးသမီး ၁၁ ယောက်ကို ဘယ်သွားရှာမှာလဲ။
- မောင်ရေ နောက်တစ်ကြိမ်သာ မေ့ကို အနမ်းတစ်ပွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့၊ မေ့ဘ၀တစ်ခုလုံးက မောင့်အတွက်ပါပဲ။
- သတိပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ။
ခန္ဓာဗေဒ စာမေးပွဲတွင် ပရော်ဖက်ဆာမှ ကျောင်းသူတစ်ယောက်အား မေးခွန်းတစ်ခုမေးသည်။
- လူ့ရဲ့ဘယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းက အချစ်သင်္ကေတအဖြစ် ရည်ညွန်းသလဲ။
- အမျိုးသမီးရဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို မေးတာလား၊ အမျိုးသားရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကိုမေးတာလား။
- ဘုရားရေ- ဆရာဝန်မှ သက်ပြင်းချကာ ပြော၏ - တို့ခေတ်တုန်းကတော့ အသည်းလို့ပဲ ရိုးရိုးပြောတာပါကွာ။
- ကျနော် မနေ့က ဒီဆိုင်က ကွန်ပျူတာ ၀ယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဗျ။
- ဟုတ်ကဲ့၊ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
- ပြဿနာမရှိပါဘူးခင်ဗျ။ ဂရန်တီရှိသေးတာပဲဗျ။ ဘာလောင်သွားပါလိမ့်။
- အဲလိုတော့ မဖြစ်တတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ ပရိုဆင်ဆာ လောင်သွားတာလား။
- လူကြီးမင်း၊ ခင်ဗျား ဘာများလုပ်လိုက်လို့လဲဗျာ။
- အင်းဗျာ မနေ့ကအိမ်မီးလောင်သွားတာဗျ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 6:02 AM0comments
ဒီရက်ပိုင်း ကျွန်တော်တို့ အလုပ်နားက ထိုင်နေကျ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်လေးမှာ တီဗွီတစ်လုံးရောက်လာတယ်။ ရောင်းကောင်းတယ် ထင်ပါတယ်။ စဖွင့်ခါစတုန်းကဆို လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ခေါ်သာရုံလေးပါ။နောက်တော့ ဒီဗွီဒီစက်ဝယ်တယ်။ သီချင်းတွေဖွင့်တယ်။ တစ်ခါတလေ အဲဒီဆိုင်မှာထိုင်ပြီး သီချင်းတွေနားထောင်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လေကန်လိုက် ဝေဖန်လိုက်ပေါ့။ ဟောအခုတော့ တီဗွီတစ်လုံးပါ ထပ်ရောက်လာပြန်ပြီ။ ဆိုင်လေးမှာထိုင်ရတာ အပျင်းပိုပြေလာတယ် ပေါ့ဗျာ။
ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ ဆိုင်လေးက ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းရယ်။ တစ်ဆိုင်လုံးမှ စားပွဲက ခြောက်လုံးလောက်ရှိတာ။ စားပွဲတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကလဲ ရုတ်တရက်ထလို့မရဘူး။ ဟိုဘက်ဝိုင်းဒီဘက်ဝိုင်းက မလွတ်မလပ်လေ။ ဆိုင်ရှင်မိသားစုကလဲ ကြိုက်လိုက်တဲ့ တီဗွီ။ တစ်ချိန်လုံး ဒါပဲ ကလိနေတာ။ ရုပ်ရှင်၊ ပြဇာတ်၊ အငြိမ့်၊ သီချင်းမျိုးစုံ၊ အိုဗျာ… စုံလို့ပဲပြောပါတော့။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်နားမှာကလဲ သူတို့တစ်ဆိုင်တည်းရယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် ဒီနားမှာကလဲ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်တစ်ခုတည်းလေ။ ကိုင်းကျွန်းမှီ - ကျွန်းကိုင်းမှီ ပေါ့ဗျာ။ အော်.. အရေးကြီးတာတစ်ခု ပြောအုံးမယ်၊ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်မှာက မိန်းကလေးများတယ်။ အဲဒီတော့ ဆိုင်မှာက မိန်းကလေး တစ်ယောက်နှစ်ယောက်တော့ ရှိနေတတ်တာပဲ။ ပြဿနာက အဲဒီမှာစတာ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ် ပျော်စရာဟာသကားလေးလား၊ ဘဝသရုပ်ဖော်လား၊ စုံထောက်ကားလား၊ ဒါမှမဟုတ် လူ့ဘဝအကြောင်း (အလွန်အကြူး) ဖွဲ့ဆိုထားတတ်တဲ့ ဦးကျော်ဟိန်း ရိုက်တတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးလား၊ ဒါမှမဟုတ်လဲ ဟိုတချိန်က မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းကြပုံတွေလား။ ဘယ်လို ရုပ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်ပါ။ ရုပ်ရှင်တစ်ခုကို ကြည့်ရင် ဇာတ်လမ်းရှိမယ်။ သရုပ်ဆောင်ကြပုံတွေ၊ စကားလုံးတွေကနေ ရသတွေပေးမယ်။ တစ်ကွက်နှစ်ကွက် မကောင်းရင်၊ ရိုင်းပြသွားရင် ဇာတ်လမ်းကြီးတစ်ခုလုံးခြုံပြီး မေ့ပေးလို့ရနိုင်ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်က အဲဒီလိုလဲထင်တယ်။ အဲ.. ခက်တာက အငြိမ့်ဗျ။ သေသေချာချာတော့ မြန်မာ့အငြိမ့်ကို နားမလည်ပါဘူး။ အဆို၊ အက၊ တင်ဆက်ပုံတွေ ကောင်းလား မကောင်းဘူးလား ပြောရအောင်ကို အခြေခံမရှိတာ။ ဒါပေမဲ့ဗျာ၊ ကျွန်တော်တို့က ပရိတ်သတ်လေ။ အားလုံးနားလည်နေစရာ လိုမှမလိုပဲ။ တစ်ခုပဲ၊ ပရိတ်သတ်ကို ရသတစ်ခုခုနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတော့ ပေးနိုင်ရမယ်။ မြန်မာ့အငြိမ့်ကို အဲဒီလိုနားလည်တယ်။ မြေဝိုင်းအဆင့်ကနေ အခုလိုစင်မြင့်အခြေအနေ၊ စင်မြင့်အခြေအနေမှာလဲ ဒီနေ့ခေတ် တခြားနိုင်ငံတွေက ပြဇာတ်တွေလို မသားနားတာ အပြစ်မှမဟုတ်တာ။ ဖြစ်အောင်လုပ်နေရတယ်ဟ ရှိတာလေးနဲ့။ အဲဒီလို နားလည်ပေးလို့ရတယ်။ ပြောချင်တာက နားလည်မပေးနိုင်တာ ရှိနေလို့ဗျ။ ဘယ်လိုမှလဲ ခွဲခြားထားလို့မရတဲ့ အငြိမ့်နဲ့ဟာသ၊ မြန်မာ့အငြိမ့်နဲ့ မြန်မာ့ဟာသလေ။
ဟာသဆိုတာကလဲ လူတွေအတွက်က သဲခြေကြိုက်။ မကြိုက်တဲ့လူဆိုတာကလဲ အင်း.. ခပ်ရှားရှားကိုး။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အငြိမ့်ကြည့်သွားရမယ်ဆို ပျော်တာဗျ။ ရယ်ရတာကိုး။ လူရွှင်တော်ကြီးတွေကို ကြည့်ရတာကိုက ပြုံးချင်စရာဖြစ်နေပြီ။ အဲ မင်းသမီးများကပြီဆိုရင် အိပ်ချင်တော့တာ။ ငယ်ငယ်တုန်းကလို့သာပြောရတာ။ မတိုးတက်ပုံများ အခုထိအဲဒီလိုပဲ။ မင်းသမီးလေးက လှရင်တော့ နည်နည်းကြည့်မိသား။ နောက်ရှိသေးတယ် ဘယ်ကနေဘယ်လိုကြားဘူးတဲ့ သီချင်းစာသားလဲ မသိဘူး၊ မှတ်မိနေတာရှိသေးတယ်။ “မြန်မာဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အယဉ်ကျေးဆုံး တိုင်းပြည်တစ်ခုပါ”တဲ့။ ခက်လိုက်တဲ့ ခံစားချက်ဗျာ။ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် သီချင်းစာသားတစ်ခုလို “ရှက်တတ်ရင်လဲသေဖို့ကောင်းတယ်” လို့ပဲပြောရမလား။ ယဉ်ကျေးပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေရဲ့၊ ဖျော်ဖြေမှု အနုပညာတစ်ခုကဟာသတွေမှာ ညစ်ညမ်းစကားလုံးတွေ လွှမ်းမိုးနေလေရဲ့။ သတိထားမိသလောက် မျိုးဆက်သစ် လူရွှင်တော်ဆိုတာလဲ ခပ်ရှားရှားပဲ။ ဝါရင့် သဘာရင့်တွေဗျ။ သူတို့အတွက် ပြက်လုံးမရှားပါဘူး။ ခွင်ကျကျလေးဆိုရင် သိပြီးသားပြက်လုံးတောင် ရယ်ရပါတယ်။ အခုဟာက အသစ်လဲရှား၊ ပျက်လိုက်ရင်လဲ မောင်နှမသားချင်းမှ အတူပြုံးရ ရယ်ရလို့မသင့်တော်။ ကျွန်တော်တို့တွေကရော အဲဒါတွေနဲ့မှ ရယ်တတ်ကြတာလား။ မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဗျ။ ဟာသတစ်ခုဟာ ညစ်ညမ်းဖို့မှ မလိုအပ်ပဲ။ သူ့ရဲ့အဓိကအချက်က လူတွေကို ပြုံးပျော်ဖို့၊ ကြည်နူးသွားစေဖို့လေ။ အခုတော့ဗျာ ဆိုးပလို့ပဲပြောရတော့မယ်။နောက်ရှိသေးတယ် ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ မွေးနေ့မှာ ကပြတဲ့အငြိမ့်ဆိုပဲ။ တော်သေးရဲ့ ရိုးရိုးလူတစ်ယောက်အတွက် ပွဲသာဆို ဘယ်လိုပျက်လုံးတွေလာမလဲမသိဘူး။ အဆဲအဆိုတွေတောင် ပါရဲ့ဗျာ။ အစတုန်းက ဒီပို့စ်မှာ ဟာသတွေကိုပါ ချရေးရင်ကောင်းမလား စဉ်းစားသေးတယ်။ နောက်တော့ စာရိုက်ရတာပျင်းတာနဲ့ မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဘာပြောချင်လဲ နားလည်ကြမယ်ထင်ပ။ အဲဒီလိုဟာသတွေနဲ့ အငြိမ့်တစ်ခုကို လ္ဘက်ရည်ဆိုင် သေးသေးလေးတစ်ခုမှာ မိန်းကလေးတွေ ရှိနေတုန်း ဘယ်မျက်နှာထားပြီး အားပေးရမလဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အဲဒီပွဲထဲမှာဆိုရင်ရော ဘေးဘီကိုကြည့်ပြီးမှ ပြုံးရမဲ့ဟာသတွေလား။ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာ့အငြိမ့်ဆိုတာ နောက်ဆိုရင် တစ်ယောက်တည်းကြည့်ရတဲ့ တိပ်ခွေ၊ စီဒီအဆင့်မှာ ရောက်နေမှာလား။ လွတ်လပ်ယဉ်ကျေးစွာ၊ ဟာသတွေနဲ့ ကြည်နူးရရင် ပိုမကောင်းပေဘူးလားဗျာ။ ဘယ်လိုပဲပြောပြော အဲဒီဆိုင်မှာ အငြိမ့်ကြည့်ရင်း ပြုံးခဲ့ဘူးတယ်။
**ဒီပို့စ်ကို ရေးချင်နေတာ၊ စိတ်ထဲမှာ ရေးထားတာကြာပေါ့။ ပီစီကအဆင်မပြေတာရယ် (သုံးရတဲ့ အချိန်ကနည်းတာရယ်)၊ အွန်လိုင်းသုံးရတာ အချိန်နည်းနည်းမှာ လုပ်ချင်တာတွေများနေတော့ အသစ်မတင်ပဲ ဟိုဖတ်ဒီဖတ်လုပ်နေတာ ပိုများတယ်။ ဒီနေ့တော့ ကိုရွက်ဝါဆီမှာ ကျွန်တော်ချစ်သော အငြိမ့်သဘင် ဆိုတာကို ဖတ်လိုက်ရမှ၊ အင်း… ပြီးပြတ်အောင် ရေးအုံးမှပါ ဆိုပြီးချရေးဖြစ်တာပါ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 1:12 AM2comments
Group Photo တော့ရိုက်ချင်ပါ့။ ဒီလိုကြီးကျလည်း တစ်မျိုးကြီးပဲ။ ကျုပ်တို့ ဘာလုပ်မိလို့လဲဗျာ။
ကိုင်း ဒီလိုဆို ပို မရှင်းပေဘူးလား။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 6:46 AM3comments
အချစ်နှင့် တွဲဖက်မစားသင့်သော အရာများ . . .
အချစ်နှင့် တွဲဖက်ဖွယ်ရာ အမြိန်အရသာများ . . . ကို အစီအစဉ် လိုက် နံပတ်ထိုးထားပါကြောင်း နှင့်
လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲခွင့် ပြုပါကြောင်း . . . .
(ကလောင်အပိတ်ခံထားရသော ကျနော်တို့ My e-journal ၀ိုင်းတော်သား ကိုဗာဘို အတွက်အမှတ်တရ )
အချစ်နှင့် တွဲဖက်မစားသင့်သော အရာများ
၄)စွဲလမ်းစွာအချစ်ကြီးခြင်း ( ကိုဗာဘို မှကျေးဇူးပြုပါသည် )
၅)စိတ်ဆတ်၍ အရှည်မကြည့်ခြင်းများ( အရွဲ့တိုက်ခြင်း)
. . . . . . .? ? ? ? ?
အချစ်နှင့် တွဲဖက်ဖွယ်ရာ အမြိန်အရသာများ
၂)နားလည် ၊ တန်ဖိုးထားခြင်း
. . . . . .? ? ? ? ?
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 9:00 PM2comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 10:37 PM 1 comments
လိုလားတောင့်တနေဆဲ . . . . .
အရောင် ရင့် ရင့်လာတယ် . . . .
(အကိုကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်တဲက စကားစုတွေပေါ့ဗျာ ။
Blog မှာဝေမျှပေးတာပါ ။)
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 10:07 PM0comments
ချစ်သူကို သတိမရတဲ့သူ ဘယ်သူရှိပါသတဲ့လဲ
နီးခြင်း ဝေးခြင်း ဆိုတာ ပညတ်ချက်တွေပါပဲလို့ ဆိုခဲ့သူရေ
ကောင်းကင်နဲ့မြေလွှာလို ထာဝရ ဝေးကြရင်ရောကွယ် . . . .
ကျနော်လား . . . . . အချစ် တောက် နေတယ်
နေလို့လည်းမကောင်းပါခင်ဗျား . . . .
ရာသီကလည်း အလွမ်းကိုဆာလောင်နေလိုကို အငြိုးတကြီး
စုံတွဲတွေကလည်း လှောင်ပြောင်ဖို့ မနက်ဆို အချိန်မှန်
ဟယ် . . . . ငါ့ကံပါပဲ လို့ ပုံပုံ ချလွန်းလို့
အခွန်တောင် နှစ်ဆ ဆောင်နေရတာလည်း ကြာပြီ ။
ကျနော့်နှလုံးသားကို နေသားတစ်ကျဖြစ်အောင် ကူပါဦး
အချစ်နဲ့ အရာရာ နေသားတကျ ဖြစ်ပါရစေ ။ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 9:13 PM0comments
ကျနော်ခုရက်ပိုင်း ရုံးပိတ်ရက်ကလည်းဆက်တာနဲ့ အပြင်မှာ အချိန်ကုန်တာများပါတယ် ။ အပေါင်းအသင်းသစ်တွေလည်းရပါရဲ့ဗျာ ။
ကျနော်တစ်ခု သတိထားမိတာက အားလုံးက ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစားစေချင်ကြသူချည်းဗျ ။ ကျနော်သူတို့အသံတွေကို နားထောင်ကြည့်တယ် တစ်ချို့ကတော့ အားမလိုအားမရ ၊ တစ်ချို့လည်း တက်တက်ကြွကြွ ။
ဒါနဲ့ ကျနော့်အသံကို ဘလော့မောင်နှမတွေကြားဝေမျှချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံ့အရေးလိုပဲ ခေါင်းစဉ်မြင်စေချင်ပါတယ်။
ကျနော်သတိထားမိတာတစ်ခုရှိတယ်။ ကျနော်တို့ငယ်ငယ်က ဂျီတီအိုင်ကျောင်းဆင်းတို့ အာအိုင်တီကျောင်းဆင်းတို့ဆိုတာ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းဆီခိုင်တွေဗျ။ အနာဂတ်သေချာပြီးသားဆိုပါတော့ဗျာ။
ဆေးကျောင်းသားဆိုလည်းထို့အတူပေါ့။ နိုင်ငံခြားထွက်လည်း အားလုံးက နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါ၏ပဲ ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုလည်း ယုံကြည်စိတ်အပြည့်ရှိကြတာ ဗျ။ ကျနော်ထင်တာမမှားဘူးဆိုရင် ခုနောက်ပိုင်း ကျနော်တို့မျိုးဆက်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရော သူများကကိုယ့်ကို မြင်ကြပုံပါ ယုံကြည်မှူ့က သုညနားကပ်ကပ်လာသလိုပဲ။
ကျနော်တို့ အချိန်တွေကုန် ငွေတွေကုန် လူပင်ပမ်းစိတ်ပင်ပမ်းခံပြီးကျောင်းတွေတက်ကြ ပညာတွေရှာကြတာဟာအနာဂတ်တစ်ခုခိုင်မာဖို့ဆိုတဲ့ အတွေးတွေ ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ၊ အိမ်မက်တွေက ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုမယ်ထင်ပါတယ်။ မိသားစုကလည်းထို့အတူ ထပ်တူထပ်မျှနီးနီးပါ။ ခုကျနော်တို့ဘာတွေဖြစ်နေကြပါသလဲ၊ ကျနော်တို့မြင်တာကတော့ တစ်ခုခုတော့ မှားနေတယ်ထင်ပါရဲ့။ မြန်မာတွေမညံ့ကြတာတော့ အစဉ်အလာနဲ့ကို ချီပြီးပြောလို့ရပါတယ်။ ခုထိလည်း သက်သေပြနိုင်ကြဆဲလို့ ကျနော်ရိုးသားစွာ ယုံကြည်ပါတယ်။
ခုအတိုင်းဆက်သွားကြရင်တော့ ကျနော်တို့ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်ကို ကောင်းစွာအသုံးချခွင့် ဆက်လက်ဆုံးရှုံးနေရဦးမည်ဟု ကျနော်ထင်ပါသည်။ ပိုးသာကုန် မောင်ပုံစောင်းမတတ် တော့ မဖြစ်စေ ချင် လှပါ။
လျာရှည်တယ်လို့ပြောလည်းခံရမှာပါပဲ ။ ကျနော့်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးခွင့်ပြုပါ။
ကျနော်တို့ ဘယ်လို များပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်နိုင်ပါသေးလဲခင်ဗျာ။ အကြံပြုပေးကြပါလို့ လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 10:43 PM 1 comments
အချစ်ဆိုတာ . . . . .
တစ်ရွေ့ရွေ့နဲ့ အိပဲ့ပဲ့ သွားတာခက်တယ်
ကျန်ခဲ့တဲ့ . . .
နာမ တွေကို ဖွဖွလေးရွတ်
ဒါ . . . .
အချစ်၏ နောက်ဆက်တွဲ က ခ ဂ တွေပေါ့ ။ ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 10:11 PM0comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တာတူး(၀ါ) အမေ့ခံလူတစ်ယောက် at 6:39 PM4comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 6:31 AM0comments
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက တားမြစ် ထားသော... at 11:21 PM0comments
ဒုတိယအချက်ကတော့ - မင်းရဲ့ အိပ်မက်တွေပေါ့
တတိယအချက်ကတော့ - မင်းပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပါ
အဲဒါတွေကို ငါကမှ မယုံကြည်ခဲ့တာ
စတုတ္ထအချက်ကတော့ - မုသားတွေလေ
ပဉ္စမအချက်ကတော့ - ဒဏ်ရာတွေပါ
ဒီနေ့ ငါမင်းကို အိပ်မက်ထဲမှာတွေ့တယ်တယ်
ပြုံးတော့ပြပါရဲ့၊ ငါ့ကိုတော့ မဟုတ်ဘူးလေ
မင်းက တစ်စိမ်းယောက်ျားတွေ ကမ္ဘာကိုထွက်သွားပြီပဲ
ဒုတိယအချက်ကတော့ - မင်းရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပေါ့
တတိယအချက်ကတော့ - မင်းရဲ့ အချစ်သစ်
အဲဒါကတော့ ပြောမပြလည်း နားလည်ပါတယ်
I. Nikolaev ၏စာသားများအားပြန်ဆိုသည်။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 12:13 AM 1 comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် ကဗျာ့ ပန်းခင်း, ကေဇက်
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 5:04 PM0comments
ဒီကဏ္ဍအောက်မှာ ဖတ်အုံးမယ်ဆိုရင် သုတ ပန်းခင်း, ကေဇက်
Buddhabrot ဆိုတာက Mandelbrot Set ကိုအထူးပြုပြင်ထားတာပါ။
သူကို့ နည်းနည်းလေးလှည့်ကြည့်လိုက်ရင် ဗုဒ္ဓပုံတော်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူလို့ အဲသလိုနာမည်ပေးလိုက်ကြတာပါ။
စာညွှန်းတယ်ပဲဆိုပါတော့။ ၀ီကီပီးဒီးယားမှာ ဖတ်လိုက်ရင် ရှင်းသွားမှာပါ။
ခံစား၊ ဝေမျှ၊ တင်ပြသူက ကေဇက် at 12:01 AM0comments